स्थानीयमाथि तामाकोसीको अर्को अन्यायः ५ महिनामा पनि सेयरको पैसा फिर्ता पाएनन् ! « GDP Nepal
( Tuesday, December 1, 2020)
स्थानीयमाथि तामाकोसीको अर्को अन्यायः ५ महिनामा पनि सेयरको पैसा फिर्ता पाएनन् !
Published On : 28 November, 2018 6:56 am
काठमाडौं । अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयवासीलाई सर्वसाधारणभन्दा कम सेयर दिएर अन्यायमात्र गरेको छैन कि कतिपयलाई ५ महिनादेखि सेयर रकम होल्ड गरेर ऋणमा डुबाएको छ ।
स्थानीयलाई कम परिमाणमा सेयर दिएर आलोचित माथिल्लो तामाकोसीले स्थानीयलाई समयमै रकम फिर्ता नदिँदा स्थानीयले सहकारीलाई बढी ब्याज बुझाउनु परिरहेको छ । स्थानीयले बढी सेयर पर्ने आशामा १७ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएर लगानी गरेका थिए ।
सर्वसाधारणले सेयर भरेको ५ महिना पूरा भइसकेको छ । तर, सेयर बाँडफाँड भएको पनि १ महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत सबै स्थानीयको रकम फिर्ता हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल आवेदकमध्ये १५ प्रतिशतको रकम फिर्ता नभएको जनाइएको छ ।
सुनको अण्डा पार्ने आयोजना भन्दै प्रचारित तामाकोसीमा सेयर आवेदन गर्नेले फारम भर्नदेखि रकम फिर्ताका लागि ताकेता गर्दै सदरमुकामसम्म धाउँदा उनीहरुको लागत निकै बढेको छ । सहकारीको ब्याजसमेत हिसाब गर्दा परेको सेयरभन्दा पनि बढी खर्च भइसकेको स्थानीय बताउँछन् ।
बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोष र सनराइज क्यापिटलमा सम्पर्क गर्दा आउँछ भन्ने जवाफमात्र पाउने गरेको पीडितहरु बताउँछन् । नाम र बैंक खाता नमिलेकाको संख्या ५० हजार रहेको र सच्याएर खातामा रकम पठाउने काम भइरहेको बिक्री प्रबन्धकको भनाइ छ ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित दोलखावासीका लागि साउन १६ देखि भदौ २१ गतेसम्म १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयरका लागि निवेदन आह्वान गरेको थियो ।
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीले ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निस्कासन गरेको छ
काठमाडौं। सामाजिक संजालमा आधारित ईकमर्स कम्पनी, सगूनले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई एक पत्र लेखी नेपालबाट लगानी
निकासी लक्ष्य २ खर्ब पुर्‍याउन निर्यात व्यवसायीको सुझाव, महासंघ सकारात्मक
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यात व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनको रुपमा विकास गर्नेगरी आफ्नो दृष्टिकोण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यभार सम्हालेयता सेयर बजारमा उछाल आएको छ । दिनहुँ नयाँ
सानिमा बैंकको कर्पोरेट पे, राजस्वदेखि व्यावसायिक भुक्तानीसम्म सहज
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेडले आफ्ना व्यवसायिक ग्राहकहरुका लागि बैंक खाताबाट डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने